I-China Quality And Wholesale USB3.1 Type-C Male to Male PD Cable Manufacturer - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-USB > Ikhebula le-USB3.1 Type-C kuye kowesilisa PD
Imodeli:Ikhebula le-USB3.1 Type-C kuye kowesilisa PD
I-Connexions ingumkhiqizi wekhebula onolwazi lwe-17year. LokhuI-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisaishaja amadivayisi akho e-PD ne-USB-C kanye nokuvumelanisa izithombe, umculo nedatha kuma-laptops. Kokubili iGoogle ne-Apple bamukele Isixhumi Sohlobo C njengesilinganiso sabo esisha kuwo wonke amadivayisi wabo weselula afaka ama-laptops. Kunezizathu eziningi zokuthi lesi sixhumi samukelwe njengoba sinjalo.
1.Ukwethulwa Komkhiqizo weI-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisa
LokhuI-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisazithobele imbobo ejwayelekile ye-PD. Isixhumi se-Thayipha-C singasetshenziselwa ukukhokhisa hhayi ama-smartphones kuphela, kepha singasetshenziselwa ukunika amandla amanye amadivayisi abekade edinga ukunikezwa amandla okuhlukile phambilini. Le ntambo ye-Thayipha-C iyabuyiselwa emuva. Lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi uyixhuma ngayiphi indlela. Awusazami ukufaka ikhebula, ukuthola ukuthi uyithole ngendlela engeyiyo, uzama futhi bese ubona ukuthi unayo okokuqala!
I-USB 3.1 idlulisa idatha efinyelela ku-10G, okusho ukuthi iyashesha ngokwanele ukuthi ingasetshenziselwa ukushayela ukuboniswa kwe-4K. Lokho kusho ukuthi ama-laptops (nama-PC wesikhathi esizayo) ngeke adinge amasokhethi e-HDMI noma e-VGA. Ungathola amazinga wokudlulisa afika ku-10G nokushaja okusheshayo kwamafoni, amathebulethi, namanye amadivayisi eselula.
I-USB Thayipha-C iyisixhumi sendawo yonke futhi esikwazi ukuphinda kabili ukungena kwe-theory kwe-USB 3.0 futhi inganikeza amandla athe xaxa. Kungakho i-Apple ibhangqa i-Thayipha-C ne-USB 3.1 ukuqeda isixhumi samandla kwi-MacBook nayo enabanye abathengisi abagijimela ukufanisa inkampani ezinkampanini zombili. Le ntambo ye-bandwidth ephezulu nakanjani iyoba yindinganiso yamadivayisi we-USB, ngakho-ke kufanele ibe nakho kuzo zonke izindlu zokubamba nasehhovisi.
2.UmkhiqizoParameter (Specification) of the I-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisa
I-USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB Thayipha A male to Thayipha C male
Ngamandla, ividiyo, inethiwekhi nokudluliswa kwedatha
Kuze kufike ku-3A
Isivinini Sokudlulisa Idatha
Kuze kube yi-5 Gbps
3.Umkhiqizo Feature And Isicelo of the I-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisa
Thayipha-C Connector has a small reversible design
Ishaja amadivayisi ngenkathi futhi idlulisa idatha
Ideal for New Macbook, Google Chromebook Pixel, Dell,Thayipha-C connector is rated at up to 300V DC/10ms of Power
Ishesha ngokwanele ukudlulisa umculo obiza unyaka wonke ngemizuzu engu-10
Dlulisa yonke i-movie ye-HD ngaphansi komzuzu
Kutholakala ku-1 Foot, 3 Foot, & 6 Foot Lengths
4.UmkhiqizoDetails of the I-USB3.1 Thayipha-C Male kuya Kwikhebula Lesilisa
Lokhucable utilizes the USB 3.0 Gen 1 specification, which supports SuperSpeed USB C transfer rates up to 5Gbps.
Thobela i-CE RoHS
6.Deliver, Shipping Futhi Ukukhonza we
Ukuthumela okusheshayo nokwesikhathi. Umthamo omkhulu wokukhiqiza namandla. Isikhathi esifushane sokuhola ngezinsuku eziyi-15-20.
Ngabe kufanele ngithole i-usb 3.0 noma i-2.0 ngoba bengizibuza ukuthi ngabe kukhona ukwehluka okukhulu?
Kunomehluko omkhulu phakathi kwe-480Mbps ne-5Gbps. Lokho kusho, kuzoshesha kuphela njengoba uyixhuma kuphi. Ngakho-ke uma uyixhumanisa nedivayisi / ishaja engu-2.0, izokhokhisa / idlulise ngejubane leshawa.
Yini i-USB 3.1 futhi yehluke kanjani kwi-USB 3.0?
I-USB 3.1 yinguqulo yakamuva ye-USB (Universal Serial Bus) yokuxhuma amakhompyutha namadivayisi kagesi. Iyakwazi ukudlulisa isivinini sedatha kuze kufike ku-10Gbps, futhi ngenkathi ingasebenzisa uhlobo lokuxhuma lwe-USB-C, ingasebenzisa nezinye izinhlobo zezixhumi ezahlukahlukene. Ukufeza isivinini sokudlulisa se-USB 3.1, ukuxhumeka kwakho kwe-USB host, izintambo, nedivayisi kufanele konke kusekele i-USB 3.1.I-USB 3.1 yaziwa nangokuthi i-USB 3.1 Gen 2 (10Gbps).
I-USB 3.0 iyakwazi ukudlulisa ngesivinini kufika ku-5Gbps. I-USB 3.0 yaziwa nangokuthi i-USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).
I-USB 3.1 ibuyela emuva iyahambisana ne-USB 3.0 ne-USB 2.0, ngaphandle kwezimo ezilandelayo:
Izintambo ze-USB-B 3.1 azihambisani namachweba we-USB-B 2.0.
· Ngaphandle kokuthi usebenzise i-adaptha, amachweba we-USB-C noma izintambo ngeke zisebenze ngamachweba we-USB-A noma we-USB-B.
Amadivayisi adinga isivinini sokudluliswa kwe-USB 3.1 se-10Gbps kungenzeka angasebenzi ne-USB 3.0 noma i-USB 2.0, noma ungahle uthole isivinini sokudlulisa esiphansi nokusebenza okunomthelela.
Amadivayisi e-USB anikwe amandla adinga amandla amaningi kunalawo anganikezwa i-USB 2.0 awahambisani ne-USB 2.0.
Amathegi ashisayo: Ikhebula le-USB3.1 Type-C Male to Male PD, China, Quality, Wholesale, Manufacturer
Ikhebula le-USB3.1 Type-C kuye kowesilisa PDIkhebula le-PD